विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारी
डोरेन्द्र बस्नेत काठमाडौं, १९ साउन
प्राकृतिक प्रकोप आफंैमा विपद् होइनन्, यो विपद् त्यतिबेला हुन्छ, जब संकटासन्न तथा उच्च जोखिमा भएर पनि उच्च सतर्कता तथा पूर्वतयारी नगर्ने समुदायमा प्रवेश गरी क्षति गर्छ ।
विश्वमा भुकम्पिय जोखिमका हिसावले नेपाल ११ औ स्थानमा छ र पानिजन्य प्रकोपहरुमा ३० औ स्थान मा छ (-UN/BCPR- 2004)। यो रिपोर्ट प्रकाशन भएको नै आज १५ वर्ष भैसकको छ । तर, यसबाट बच्न गरिने पूर्वतयारी केवल बोलीमा मात्रै सीमित छ । बेला बेलामा ठूला विपत्तिको सामना गर्नु परे पनि हाम्रो चेत खुलेन ।
खासगरी, हाम्रा संयन्त्र विपद् पूर्वतयारीमा भन्दा राहत वितरणम्रै बढी केन्द्रित भएकाले यो अवस्था आएको हो । नेपालमा १ हजार बढीले हरेक वर्ष विपद्जन्य घटनाका कारण ज्यान गुमाउँछन् भने २ अर्बको हाराहारीमा आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । दुई वर्षपहिले तराई बाढीमा डुबेको थियो । त्यतिबेला पनि विपद् व्यवस्थापनबारे धेरै चर्चा र बहस भएको थियो । यो वर्ष फेरि तराईमा बाढीले क्षति पुर्यायो ।
३० असारसम्म देशभरमा गरी बाढीपहिरोका कारण ६४ जनाको ज्यान गएको र ३१ जना बेपत्ता भएका छन् । भौगोलिक बनावटै कारण नेपाल प्रायः सधैं विपद्मा परिरहन्छ ।
२०७२ सालको भूकम्पमा नेपालले ठूलो जनधन गुमायो । भूकम्पपीडितका आँखा अझै ओभानो भएको छैन । अर्बौंको राहत आयो, सयौंले राहतबाटै पेट भरे । कैयौं भूकम्पपीडित जनता अझै पनि त्रिपालमुनि नै छन् । सभा, सम्मेलन र गोष्ठी जनताको नाममा गरिन्छ तर जनताको अवस्था निकै कारुणिक छ ।
२ भाद्र २०६५ मा कोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका ५० हजार बढीले बासस्थान गुमाए भने अर्बांैको क्षति भयो । त्यसबेला २–४ महिनासम्म र्याली गरियो, नारा लगाइयो । विपद् व्यवस्थापन र बाढी व्यवस्थापनको परिणाम खै त ? त्यतिबेला पनि भारतलाई गाली गरिएको थियो ।
हामी तराई डुबानबारे भारतलाई दोष दिन्छांै । भारत सरकारले आफ्ना जनताको हितमै कोसी सम्झौता गरेको थियो । नेपालको दक्षिण सिमानामा भारतले बाँध बनायो, नेपाल सरकार रमिते भएर बस्छ अनि अहिले भारतीय बाँधका कारण तराई डुबानमा पर्छ । यसकारण, अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीतका कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर उठान गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
विपद् पूर्वतयारीले ९० प्रतिशतसम्म क्षति कम गर्न सकिने प्रमाणित भइसकेको छ । सन् १९७० मा बंंगलादेशमा ठूलो सामुद्रिक आँधी आयो, यो आँधीमा ५ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । सन् २००७ मा फेरि त्यस्तै ठूलो समुद्रिक आँधी आयो तर यसपल्ट ४ हजारले ज्यान गुमाए । यो यति ठूलो परिवर्तन कसरी सम्भव भयो ? उत्तर सजिलो छ, त्यहाँ सरकारले विपद् पूर्वतयारीका क्षेत्रमा व्यापक काम गरेको छ । जनताले पनि सरकारलाई साथ दिए । तर, नेपालको अवस्था भने उल्टो छ ।
तराई डुबानको समयमा २–४ पोका चिउरा, एक बोरा चामल र २–४ वटा कम्बल बाँडेर पीडितसँगको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जाल रंगाउँदै गरिबीको मजाक उडाइँदै छ । यो कार्य दण्डनीय छ, घृणित छ ।
धेरै स्थानीय तह तथा समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् तर यस्तो विपद्को बेलामा उनीहरूलाई किन सक्रिय गराइँदैन ?
प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिमबाट बच्न हामीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनौं । हामीले दिगो विपद् व्यवस्थापनका लागि आपतकालीन राहत वितरणमा भन्दा पनि विपद्बाट हुने असरलाई कम गर्ने कार्य सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्माण कार्य तथा पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ, जसबाट राहतमाथिको परनिर्भरता घटोस् । विपद्लाई सम्बोधन गर्न स्थानीयस्तरमै क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिगत विकासभन्दा पनि सामुदायिक क्षमता विकास तथा पूर्वतयारीमा जोड दिनु जरुरी छ । अस्थायीभन्दा पनि दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी काम गर्नुपर्छ । साथै विपद् व्यवस्थापनलाई जीविकोपार्जनसँग सँगै लैजान उत्तिकै जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २०, २०७६, १२:१६:००
फेरि उसै गरी ब्युँझनुपर्छ ‘कहिल्यै ननिदाउने शहर’